Ku iibso Bitcoin gudaha Nigeria si degdeg ah oo Amaan ah | Paxful
Ku iibso kuna Iibi Bitcoin (BTC) gudaha Nigeria
Ka ilaali lacagtaada lacagta Naira ee hoos u dhacaysa kuna badbaadso lacagtaada Bitcoin. Ku iibso Bitcoin qaab kasta oo lacag bixin ayna ku jiraan Kaarka Hadiyada ee Amazon, iTunes iyo lacagta Baanka Lagu diro!
Lacag ka badan 1000 oo Bitcoin ah ayaa mar hore lagu iibsaday Nigeria!
Daawo tusmadeena sida qaab fudud loogu iibsado Bitcoin
Lacagta Teleefoonka gacanta ee MTN
Degdeg ah—Qiimaha ugu wanaagsan
Halkaan guji si aad u aragto dhammaan dookhyada
300 oo noocyada lacag bixinta ah
1. Dooro qaab aad lacagta ku bixiso adoo ka bilaabaaya dhanka kor
Ka dooro qaababka lacag bixinta ee ugu koreeya gudaha Nigeria. Ama hel qaab kasta oo kale oo lacag bixin adoo ka xulanaaya qaababka hore ee ugu koreeya.
2. Ku qor cadadkaaga
Cadadka oo Naira ah
1. Aad si aad kaararka hadiyada kaash ugasoo iibsato dukaanka deegaankaaga sida Blessings Computer ama Konga.com.
2. Dooro Qaabka lacag bixinta ee kore iyo nooca iyo cadadka lacagta kuugu jirta kaarkaaga kadibna guji "Hadda Iibso Bitcoin". Bog cusub ayaa furmaaya adoo ka helaaya yabooha ay dooratay Paxful (yabooha ugu fiican).
3. Ka akhri shuruudaha yabooha oo biloow ganacsiga. Soo geli sawirada dhabarka danbe ee kaarka la xoqay iyo risiidka. Xaqiiji inaad kaarka ka shaqaysiiso marka koobaad! Guji batoonka "Waan raacay tilmaamaha" kadibna sug inta Bitcoin ka laguu fasaxaayo.
1. Dooro Lacag ku dirista Baanka wadanka kadibna ku qor cadadka aad doonayso inaad bixiso kor. Iibiye ayaa kaa caawin doona inaad lacag ku shubato kaydkaaga Paxful ee Bitcoin ta.
2. Raac tilmaamihiisa si aad lacagta ugasoo dirto koontada baankaaga aadna ugu dirto iibiyaha. MA JIRAAN LACAG BIXINADA DEGDEGA LOO SHEEGO, LOOMA BAAHNA ATM.
3. Marka lacagta la diro, Guji batoonka "Waan raacay tilmaamaha" kadibna sug inta Bitcoin ta laguu fasaxo.
4. Bitcoin ta ayaa isla markaba soo galaysa kaydkaaga Paxful waxaana loo diri karaa meeshaad doonto isla markaba.
Ku iibso Western Union / MoneyGram
1. Dooro Western Union ama MoneyGram kadibna ku qor cadadka aad isticmaalayso kor. Iibiye ayaa kaa caawin doona inaad lacagta ku darto kaydkaaga Paxful ee Bitcoin ta.
2. Raac tilmaamihiisa si aad lacagta u dirto. Waxaa jiri kara sugitaan dheer markaad ku dirto Western Union laakiin iibiyaha Paxful malahan wax dib u dhacyo ah.
Ku iibso Western Union
Paxful waa suuqa Bitcoin ka dadwaynaha caadiga ah kala gataan kaasoo iibsadayaasha ku xira iibiyaasha. Keliya dooro sida aad rabto inaad ku bixiso lacagta oo qor cadadka Bitcoin ka aad u baahan tahay.
Ka caawi dadka Nigeriyaanka ah inay helaan Bitcoin waxaadna heli kartaa faa'iidooyin WAAWAYN oo gaaraaya 60% markasta oo aad iib samayso. Biloow inaad ku iibiso koontada baanka ee Nigeria hadda, arag tusmadeena bilaashka ah.. Paxful waxay ka heshaa 1000 Iibsadayaasha Bitcoin ka wadanka Nigeria maalin kasta.
Furo ciwaan oo biloow inaad iibiso
Ma taqaanaa dad badan oo doonaaya inay Bitcoin gataan gudaha Nigeria? Adoo kaashanaaya Dukaankaaga Bitcoin iyo Barnaamijka iskaashatada waxaad helaysaa 2% ganacsi kasta abidkaa adoo la wadaagaaya lifaaqa. Hadda biloow.
Bitcoin waa hanti oonleen ah iyo qaab lacagta lagu bixiyo. Paxful ayaa fududaysa una badasha kaararkaaga hadiyada Bitcoin kanasoo badasha Bitcoin. Bitcoin waxay noqotay hanti qiimo badan aduunkeena oonleenka ah. Waxaad u qaadan kartaa inay tahay nooca interneedka ee dahabka. Si lamid ah dahabka, qiimaha Bitcoin ayaa kor iyo hoos u socday waxaana la filayaa in koror gaabis ah ku dhaco qiimaha Bitcoin, gaar ahaana marka xiliyada dhaqaaluhu cakiran yihiin.
Elektarooniga - NewEgg
Suuq cusub oo Bitcoin ayaa diirada saaraaya Nigeria
Iibinta iyo Iibsiga Bitcoin waxaa fududaysay Paxful